बामदेव सांसद भएपनि मन्त्री बन्न संबिधान नै बाधक – Weekly Nepal
in Uncategorized — १९ भाद्र २०७७, शुक्रबार ०६:५७
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता बामदेव गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भएपनि मन्त्री बन्न संविधान वाधक रहेको छ । यही भदौ २० गतेबाट रिक्त हुने राष्ट्रिय सभाका सदस्यको एक पदमा बामदेव गौतमलाई मनोनीत गरेपनि उहाँ मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक ब्यवस्था छ ।
अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यकाल भोलि गतेबाट समाप्त हुँदैछ । डा. खतिवडा राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाएर मन्त्री पदलाई निरन्तरता दिने वा सो सदस्यमा नेकपाका नेता गौतमलाई ल्याउने भन्ने बारेमा विवाद हुँदै आएको थियो । बिहीबार बसेको सचिवालय बैठकले भने गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउने निर्णय गरेको छ ।
अपवाद बाहेक मन्त्री हुनको लागि कि त प्रतिनिधि सभाको कि त राष्ट्रिय सभाको सदस्य हुनु पर्दछ । अवपादको रुपमा ६ महिनाको लागि भने संघीय संसदको सदस्य नभएको ब्यक्ति पनि नेपालको संविधानको धारा ७८ (१) बमोजिम मन्त्री हुन सक्नेछ । सो बमोजिम डा. खतिवडा मन्त्री बन्नुभएको हो ।
नेकपाका नेता गौतम आफूलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनाउनु पर्ने र त्यसपछि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्ने भनी प्रधानमन्त्री ओलीको भेटमा बताउनुभएको बताइन्छ । नेता गौतम यही प्रतिनिधि सभाको लागि भएको निर्वाचनमा बर्दिया जिल्लाबाट पराजित हुनु भएको थियो । निर्वाचनमा पराजित भएका कारण नेता गौतमको हकमा संविधानको धारा ७८ को उपधारा (४) लागू हुने कानूनविद्हरुको धारणा रहेको छ ।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा कथम्कदाचित गौतम राष्ट्रिय सभाको सदस्य भइहालेमा कुनै पनि मन्त्री बन्न संविधान वाधक रहेको बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘गौतम यो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल भर मन्त्री बन्न सक्नुहुन्न ।’यो खवर आज नेपाल समाचारपत्रमा छापिएको छ ।